ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: October 2011
သူ့ လောက်တော့ ဖြင့် ဘယ်သူမျှကံကောင်းနိုင်လိမ့် မည်မထင်...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ဦးဟာ ၎င်းမောင်းနှင်လာသည့် ကားရှေ့ မှန်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာ
သည့် စတီးသံချောင်းပေါင်းများစွာနှင့် ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲ ပွန်းပဲ့ ရုံလောက်သာဒါဏ်ရာရကာ
အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ယန်းကျွန်ရှန်းဟာ ၎င်းထံသို့ ဦးတည်ဝင်ရောက်လာသည့် အဆိုပါ သံတန်းများ
အားငုံ့ ရှောင်လိုက်ခဲ့ ရာ မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာ၊ အံ့ အားသင့် စရာပင် သံတန်းတစ်ခုမျှ ၎င်းအားမထိ
ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေခဲ့ သည့် ယန်းတစ်ယောက်တော့တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျေကျန်း ပြည်နယ်၊ တိုင်ကျိူးဒေသ
တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် မတော်တစ်ဆဖြစ်မှုတွင် ဘယ်ဖက်ပါးတွင်သာ ပွန်းပဲ့ ရာအနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ တာဖြစ်
၎င်းမောင်းနှင်လာသည့် ကားမှာ တရားဝင်လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်မထားရသေးသည့် အတွက် ယာဉ်ထိန်းရဲထံ
မှ ထွက်ပြေးမောင်းနှင်ခဲ့ ရာမှ ယခုကဲ့ သို့ မတော်တစ်ဆမှုဖြစ်ခဲ့ ရကြောင်း ယန်းက ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်..
၎င်းဟာ ရှေ့ တွင်မောင်းနှင်နေသည့် စတီးသံချောင်းများတင်ဆောင်ထားသည့် ကုန်တင်ထရပ်ကားအားဝင်
ရောက်တိုက်မိတာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကားရှေ့ မှန်မှတစ်ဆင့် စတီးသံချောင်းများထိုးဖောက်ဝင်ေ၇ာက်လာခဲ့ ခြင်း
" ထိုတစ်ခဏမှာပဲ ကျွန်တော်သတိရှင်ရှင်ထားနိုင်ခဲ့ ပြီး ယာဉ်မောင်းသူနံပေးမှ ခရီးသည်ထိုင်ခုံရှိရာသို့ အ
လျင်အမြန်ပဲ ငုံ့ ရှောင်လိုက်ပါတယ်....
၀ုန်းကနဲအသံကြီးကြားလိုက်ရပြီး ကားလည်းရပ်သွားကာ သံချောင်းများနဲ့ ကားတစ်စင်းလုံးပြည့် နေတာမို့ 
ကျွန်တော် လှုပ်လို့ တောင်မရတော့ ပါဘူး... သံချောင်းတွေဆိုတာ ကားထဲနေရာအနှံ့ ပါပဲ..." လို့ သူကဆိုခဲ့ 
သူဟာဆေး၇ုံသို့ သွားေ၇ာက်ခဲ့ ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ ပေမယ့် ပွန်းပဲရုံကလွဲလို့ တစ်ခြားမည်သည့် 
ဒါဏ်ရာမျှ မရရှိခဲ့ ပါဘူးလို့ ဆရာဝန်များကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကနေ အသက်မသေပဲ ၊ ဘာမှမဖြစ်ပဲ လွတ်မြောက်တာကိုက မျက်
လှည့် ဆန်လွန်းလှပါတယ်.....တိုက်ထားတဲ့ ကားကိုမြင်လိုက်ရတုံးက ယာဉ်မောင်းသူတော့ သေမှာမလွဲပဲ
လို့ ကျွန်တော်ထင်မိလိုက်ပါတယ်..." ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A Chinese driver escaped with barelyascratch after hundreds of steel bars crashed through the windscreen of his car.
Yang Junsheng, 24, ducked as the bars shot towards him and incredibly they all missed him.
He was left in shock - but with onlyafew scratches to his left cheek, following the accident in Taizhou, Zhejianag Province.
Yang admitted that the accident happened as he was trying to drive away fromapolice officer as the car was unregistered.
He smashed intoapick-up truck carryingaload of steel bars which were sent flying through his windscreen.
"My mind was very clear at that second, and I immediately dived down onto the passenger seat," Yang said.
"I heard an explosion and when the car stopped I couldn't move because the car was full of metal bars. They were everywhere."
He went to hospital foracheck up but doctors said he had no injuries at all, apart from his scratches.
"It's pure magic that he could survive this," said one police officer. "When I saw the car I thought the driver had to be dead."
Posted by Unknown | at 12:00 PM |0comments
Labels: news: web.orange.co.uk
မြည်းတစ်ကောင်နှင့် မဖွယ်မရာသံဝါသပြုနေသူတစ်ဦးက ထိုမြည်းဟာ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ညကပွဲရုံတစ်
ခု ( နိုက်ကလပ်တစ်ခု ) မှ ၎င်းခေါ်ဆောင်လာသည့် ပြည့် တန်ဆာ၊ အပျော်မယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်လို့ လွန်
ခဲ့ သည့် တနင်္လာနေ့ ကတရားရုံးတစ်ခုတွင် ထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့ သဖြင့် အံ့ အားသင့် ခဲ့ ကြရပါတယ်...
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၊ ဇဗီရှာဗိန်းဒေသ၊ မန်ဒါဗာမြို့ နယ်ကလေးမှ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆန်းဒေးမိုရို အား
တိရိစ္ဆာန်များအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္လာနေ့ ကတရားစွဲဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ဇဗီရှာဗိန်းဒေသဆိုင်၇ာ တရားသူကြီး မေးလ်ဒရ၇်မာတူဗီ အနေဖြင့် မိုရိုအား လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံ
နက် ၄ နာရီအချိန်တွင် ၎င်း၏ခြံဝင်းအတွင်း ထိုတိရိစ္ဆာန်အားမဖွယ်မရာ ပြုလုပ်နေသည်ကို ပုံမှန်ကင်း
လှည့် နေကြသည့် ရဲများကတွေ့ ရှိခဲ့ ပုံကိုကြားနာခဲ့ ပါတယ်...
မြည်းကို မီးမှတ်ပါလို့ ...သူ့ ဆင်ခြေ...
၎င်းအားအပြစ်ရှိကြောင်းထုချေခြင်းမပြုလုပ်စေခဲ့ သော်လည်း မိုရိုကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ ကြောင်း ၀န်
ခံ ပြောကြားခဲ့ ပေမယ့် သူပေးတဲ့ ဆင်ခြေဇတ်လမ်းကြောင့် တရားရုံးတစ်ခုလုံးအုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်
" ကျွန်တော်မျိူးကြီးအဖမ်းခံရတော့ မှပဲ ကျွန်တော်ဟာ မြည်းတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့် ချစ်တင်းနှောနေ
တာဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတော့ တယ် တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာ...
ကျွန်တော်ဟာ ထိုအပျော်မယ်အား မြို့ လယ်ကပွဲရုံ၊ နိုက်ကလပ်မှ ညကြေး ဒေါ်လာ ၂၀ ဖြင့် ပျော်ပါးအိပ်
စက်ရန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူမအနေဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံ မြည်းတစ်ကောင်အသွင်သို့ ပြောင်းလဲ
သွားခဲ့ ရသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်မျိူးလည်း မသိရှိပါကြောင်းဖြင့် လည်း ၎င်းကလျှောက်ထားပြောကြားခဲ့ 
တရားသူကြီးက မိုရိုအား ဆက်လက်ထ်ိမ်းသိမ်းထားရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပြီး၎င်းအားအစိုးရဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ
ရှင်နှစ်ဦးမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်လည်းညွှန်ကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူတို့ ဆီမှာလည်း ဗူးဒူး လို့ ခေါ်တဲ့ အာဖရိက စုန်းကဝေအတတ်တွေခေတ်စားတာမို့ တရားရုံးမှာ ဒီလိုမျိူး
A man caught having sex withadonkey stunnedacourt on Monday by claiming that the animal was in factaprostitute he pulled fromanightclub. Sunday Moyo, 28, from Mandava township in Zvishavane, Zimbabwe, was charged with bestiality on Monday.
“I had hiredaprostitute and paid US$20 for the service at Down Town night club and I don’t know how she then becameadonkey.” The magistrate remanded Moyo in custody until October 27 and also ordered that he be examined by two government psychiatrists.
Posted by Unknown | at 11:26 AM |0comments
ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး သတို့ သား...
ဟာဇီအဗ္ဗဒူနူးရ် အတွက်ကတော့ အသက် ၁၂၀ ရောက်မှပဲ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘ၀ကိုအခြေတစ်ကျနေထိုင်
တော့ မယ့် ပုံပါပဲ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အရှေ့ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ဆက်ဂ်သာရီ ရွာကလေးမှ မစ္စတာနူးတစ်ယောက် အသက် ၆၀ အ
ရွယ်ရှိ သတို့ သမီး ဆမွိုင်ဘီဘီ အား ဒုတိယမြောက်အကြိမ်လက်ထပ်တော့ မှာမို့ ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး
သတို့ သားအဖြစ် စာရင်းဝင်သွားတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် တစ်ရာကျော်လို့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်စွန်းနေသူတစ်ဦးအတွက်တော့ သူ့ မျက်နှာဟာ နုဖတ်လန်း
ဆန်းနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ အဘိုးအိုဟာ သားနှစ်ဦး၊ သမီးလေးဦးနှင့် မြေးမြစ်တွေတစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ 
လူပေါင်း ၁၂၂ နှစ်ရှိ မိသားစုကြီးကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၁၂၀ နှစ် ဖြင့် ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး သတို့ သားအဖြစ် ပျော်ရွင်ကျေနပ်နေသည့် 
အာသံပြည်နယ်မှ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သည့် ရွာကလေးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သူ့ ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို ဧည့် ပရိတ်သတ်ပေါင်း ငါးရာတက်ရောက် အားပေးခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ ပထမဇနီး ဆာလီမာခါတွန် က၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်သေဆုံးသွားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူ့ ကိုပြုစုစောင့် ရှောက်
ဖို့ နောက်ထပ်မိန်းမတစ်ယောက်ရှာပေးဖို့ သူ့ ရဲ့ သားသမီးတွေကို သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်လို့ Times of
India သတင်းစာရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
အသက်ကြီးပြီမို့ ဆေးပေးမီးယူလေးတော့ လိုတာပေါ့ ...
Family snap: Mr Noor asked his children to find himanew wife after his first died in 2005. 60-year-old Samoi, from North Foolbari village, has promised to look after him
" အမေဆုံးသွားပြီးနောက်မကြာခင်ပဲ အဖေက သူ့ ကိုပြုစုစောင့် ရှောက်ဖို့ မိန်းမတစ်ယောက်ရှာပေးပါလို့ 
အသက် ၁၀၀ ကျော်အဘိုးကြီးအတွက် သတို့ သမီးရှာပေးရတာကတော့ တစ်ကယ်မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ
ပဲ...ဒါပေမယ့် လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်နဲ့ သူ့ ထက်အသက်တစ်ဝက်ငယ်တဲ့ အမျိူးသမီးတစ်
ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ အမေအသစ်အဖြစ်အစားရခဲ့ ပါတယ်...
သူမကငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ ပါတယ်...ခင်ပွန်းသည်ဆုံးသွားခဲ့ ပြီး သားသမီးလည်းမရှိခဲ့ 
ပါဘူး..." လို့ သားဖြစ်သူ ဟာဇီအဇီယာအူဒင် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မစ္စတာနူးရ်နှင့် လက်ထပ်ပြီးနောက် သူ့ ရဲ့ ဇနီးအသစ်ဟာ သူမထက်အသက်ပိုကြီးကြသည့် လင်ပါသားနှင့် 
လင်ပါသမီးများအားလုံးနှင့် ပါ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိခဲ့ ပါပြီ...
" ကျွန်မရဲ့ ခင်ပွန်းကို အစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့် ရှောက်သွားမှာပါ ..." လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ ဆီက အသက် ၈၀ ကျော် ဘဘကြီးသခင်တင်မြလည်း ဆေးပေးမီးယူ ဒွေးချိူးလေးတစ်
ယောက်နဲ့ ထပ်ယူတာ အပြစ်မဆိုသာတော့ ဘူးပေါ့ ...
At the grand old age of 120, it was probably about time Hazi Abdul Noor settled down and got married.
Mr Noor claims to be the oldest bridegroom in the world after tying the knot with second wife Samoi Bibi, 60, in the village of Satghari in north-eastern India.
Posted by Unknown | at 2:20 AM |0comments
ဒူဘိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်မည့် မြန်မာ့ စင်တင်
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ပထမဦးဆုံးမြန်မာ့ စင်တင်တေးဂီတပွဲမို့ 
မြန်မာတို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် လာရောက်အားပေးလှည့်ပါလို့ 
ယူအေအီးနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများစီစဉ်ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ စင်တင်တေးဂီတပွဲတစ်ခုကို လာ
မည့် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ သောကြာနေ့ တွင် ဒူဘိုင်းမြို့ ရှိ၊ ရှိတ်ရာရှစ်ခန်းမဆောင်တွင် ကျင်းပ
ဤတေးဂီတပွဲဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ပထမဦးဆုံးကျင်းပမည့် မြန့် မာဂီတပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ယူ
အေအီးနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများစုစည်းတည်ထောင်ဖွဲ့ စည်းထားသည့် ကန္တာရ၀ဿလူမှုရှေ့ 
ပါဝင်သီဆိုဖျော်ဖြေမည့် အနုပညာရှင်များကတော့ အာဇာနည်၊ ဇော်ပိုင် နှင့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ အပြင် ယူ
အေအီးနိုင်ငံရောက် ဂီတ၀ါသနာရှင် လူငယ်မောင်မယ်များလည်း ပါဝင်သီဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါတေးဂီတပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဒူဘိုင်းရှိ ရွှေမြန်မာစားသောက်ဆိုင်အပါဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ကုမ္ပဏီများကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်...
200 DHS (VIP) ၊ 150 DHS ( PLATINUM ) ၊ 125 DHS ( GOLD ) ၊ 100 DHS ( EMERALD ) ၊
75 DHS ( BALCONY SAPPHIRE ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်...
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အခက်အခဲများအား ကူညီပံ့ ပိုးပေးခြင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိလူမှုရေးအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများအားတတ်အားသရွေ့ ကူညီလှူဒါန်းခြင်းစသည့် မြန်မာလူ့ ဘောင်
စုစည်းတည်ထောင်သည့် ကန္တာရ၀ဿလူမှုရှေ့ ဆောင်အသင်းနှစ်ပါတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပ
မည့် စင်တင်တေးဂီတပွဲတွင် အမြတ်အစွန်းများရရှိခဲ့ ပါလျှင်လည်း ထိုငွေများအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ 
ပို့ ဆောင်လှူဒါန်းမှာဖြစ်တာမို့ နွမ်းသမျှအပန်းလည်းဖြေ၊ အလှူဒါနပြုကြသူငါလည်း ဖြစ်အောင် ယူအေအီး
ရောက် ရွှေမြန်မာတို့ မျိူးချစ်စိတ်ဓါတ်များ၊ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်များဖြင်လာရောက်အားပေးကြပါလို့ နှိုးဆော်
အင်္ဂလိပ်လိုသတင်းလေးကတော့ enchantingmyanmar website မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်...
Myanmar nationals working in the United Arab Emirates(UAE) plans to holdaMyanmar Music Concert 2011 at Dubai on October 28 at Sheik Rashid Auditorium in Dubai.
This would be the 1st Music Concert ever to be held in the Middle East and is organized by the Kantarya Watha Association(ကန္တာရ ဝဿ လူ မှု ရှေ့ ဆောင် အ သင်း), the leading association of Myanmar expatriates working in the UAE, to commemorate the 1st Anniversary of its founding . The vocalists will include popular singers like Wine Su Khine Thein, R Zarni and Zaw Paing.
It is learnt that the concert is being supported and sponsored by many Dubai based Myanmar owned commercial enterprises.
Posted by Unknown | at 12:17 PM | 1 comments
Labels: advertisement, News Article
မှာ တင်ထားနိုင်တာကိုက နည်းတဲ့ စိတ်ထားမြင့် မြတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး....မူရင်းရိုက်ကူးသူမသိပဲ ကြားကတစ်ယောက်ယောက်က ကူးတင်တယ်ဆိုယင်တော့ လည်းမတတ်နိုင်ပေဘူးပေါ့ ...
သို့ သော်စီးပွားရေးအရမဟုတ်ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အပျော်ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်တာမို့ သိခဲ့ လျှင်တောင်မှ
သူများတွေသာလက်နက်ကြီးနဲ့ ထုတာ...ကိုယ့် ကျတော့ ယင်ကောင်၊ ခြင်ကောင်ကလေးတောင်မှ
ဆန်းပြား၊ ခမ်းနားတဲ့ ကား...
အဲဒီလောက်ကြီးလို့ ...အဲဒီလိုကို ခုတ်ဖြတ်ရပါတယ်...
အပေါ်တက်ပြီးနားမယ်လို့ တော့ မကြံလေနဲ့ ...
သူ့ အကြိုက်မဟုတ်တော့ လည်း....မခံစားနိုင်ပြီ...
သြော်...လားကလူကိုပြန်စီးတယ်ဆိုတာ ဒါမျိူးပေါ့ ...
သူတို့ အတွက်တော့ ချစ်စရာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပါပဲ...
တွေ့ လား .... သူများတိုင်းပြည်တွေက တပ်မတော်သားတွေဆိုတာ...
ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိူးကို ဒီလိုစွန့် လွှတ်အနစ်နာခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်...
သြော်...ခုံလေးတစ်လုံးအတွက် သစ်တစ်ပင်လုံးများ ခုတ်ခဲ့ လိုက်ကြလေသလားဗျာ...
ရေမီးအစုံနဲ့ အထူးကားပေါ့ ....ကမ္ဘာအနှံ့ လျှောက်လည်နိုင်မယ့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကားဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့ ...
အဲဒီလူကတော့ အမှန်တစ်ကယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးကလေးမွေးခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
﻿တစ်ကယ့် ကာတွန်းထဲကအတိုင်းပါပဲ.... ချစ်စရာလေး...
Posted by Unknown | at 11:15 AM |3comments
Labels: photos : fun
ထူးထူးခြားခြားဂင်းနက်စ်စံချိန်များ...( ၁ )
အသက်အငယ်ဆုံးကမ္ဘာကို တစ်ဦးတည်း လေယာဉ်ဖြင့် ပျံသန်းပါတ်မောင်းခဲ့ သူ...
လူမည်းတွေထဲမှာလည်း ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာပါတ်ပျံသန်းတဲ့ သူပါပဲတဲ့ ...သူကမ္ဘာပါတ်ပျံသန်းတာ ၉၇ ရက်
ကြာပါတယ်... သူဟာ ဖလော်ရီဒါ တက္ကသိုလ်က လေကြောင်းအတတ်ပညာသင်ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ..
မက္ကစီကို နိုင်ငံမှ ဗစ်တာလာရီဂိုမက်ဇ်၊ ဂေဘရီရယ် ဒန်နီရာမို့ စ်ဂိုမက်ဇ်၊ လူဝစ်စာလီလီယာဒီလီယာ
အဆီဗက်စ် နှင့် ဂျီးစက်မန်နူအယ်ဖာဂျာဒိုအဆီဗက်စ် ( ပုံတွင်ဖော်ပြထားသူ ) တို့ ဟာ မိသားစု ၁၉
ယောက်ရှိသည့် အနက် မွေးရာပါ အမွေးထူရောဂါဆန်းအခြေအနေခံစားနေရသူ ၄ ဦးတို့ ဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ မိသားစုဟာ ဆွေစဉ်မျိူးဆက် ၅ ဆက်အထိ အဆိုပါ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အပြား အမွေးအ
ထပ်ကြပေမယ့် အမျိူးသားများတော့ ခြေထောက်နှင့် လက်များမှလွဲပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုံးအထိ
ယော့ ခ်ရှိုင်းယားနယ်မှ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ နွားမကြီး Swallow ကတော့ ကမ္ဘာ့ အရွယ်အစား
အသေးဆုံး၊ အငယ်ဆုံး နွားမအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ ရပါတယ်... အမြင့် ၃၃ လက်မသာရှိပါတယ်...
နွားထီးကြီး ဖရက်ဒီ နှင့် အတူယှဉ်တွဲဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ ဆံပင်အရှည်ဆုံးပိုင်ရှင်ဆုကိုတော့ အရှည် ၁၈ ပေ၊ ၅.၅၄ လက်မ ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရှီချူပင်း
ကရရှိသွားပါတယ်...သူမဟာ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဆံပင်မဖြတ်ပဲအရှည်
ဤကဲ့ သို့ အနေအထားဖြင့် အရှည်ကြားဆုံးစံချိန်အဖြစ် အိုင်အိုနာအိုယွန်ဂျာရဲလ်လဗ်ဆန်ဒေါ့ 
( မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံသူ ) က ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ က အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ 
သည့်ပြပွဲတွင် စက္ကန့် ၅၀ ကြာ တင်ဆက်ပြသနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
နှာခေါင်းဖြင့် ပူပေါင်းအများဆုံးမှုတ်နိုင်သည့် စံချိန်ကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အန်ဒရူးဒါလ် က
အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြပွဲတွင်၃ မိနစ်အတွင်း
ပူပေါင်း ၂၃ ခုမှုတ်ပြကာ အစွမ်းပြစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အရပ်အရှည်ဆုံးလူသားဘွဲ့ ကိုတော့ ( ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ နေ့ ဖွား ) တူရကီနိုင်ငံသား
ဆူလ်တန်ကိုးဆင် က အရပ် ၈ပေ၊ ၁ လက်မဖြင့် ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဒေါက်တာ ဒေးဗစ်အာ အဒါမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ တွင်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူယောက်မြို့ တွင် ပစ်ကွင်းအဖြစ်သရုပ်ပြတင်ဆက်သူအမျိူးသမီး တီနာ နဂီ ကို
၁၄ လက်မဓါးမြှောင်ပေါင် ၁၀၂ ချောင်းတိတိပစ်ပြပြီး ဓါးပေါက်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိသွားခဲ့ ပါတယ်...
အရှည် ၂၄ ပေရှိသည့် မြွေကြီးဖလပ်ဖီကတော့ ဖမ်းမိသမျှအသက်ရှင်ဆဲ ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးမြွေအဖြစ်
၂၀၀၁၁ ခုနှစ်အတွက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ဖရန့် ဒင်မော့ ခ် စိုက်ပျိူးဖြစ်ထွန်းခဲ့ သည့် သခွားသီးကြီးကတော့ အရှည် ၄၁.၂၅ လက်မ
ဖြင့် ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးသခွားသီးစံချိန်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင်တင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်နှုံးမောင်နှင်ခဲ့သည့် အမြန်ဆုံး လက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်နိုင်သည့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာကျောင်း
ဘွဲ့ ကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်၊ ရှယ်ဘိုင်ဗီးလ်ဒေသမှ The Best Man မော်တော်
ယာဉ် ကရရှိခဲ့ ပါတယ်...ထိုမော်တော်ယာဉ်တွင် ဆေးမှုတ်ကာအရောင်ခြယ်ထားသည့် မှန်ပြတင်းများ၊
တရားဟောစင်မင်းလမ်းမ၊ တရားဟောစင်၊ အော်ဂင်၊ ၀ပ် ၁၀၀၀ အားရှိ စတီရီယို စနစ်၊ အထပ်သုံးခုရှိ
သံလက်တန်းများလည်းပါရှိသည့် နောက်တွဲပါ ပါဝင်ပါတယ်...
ပတ်ဂီလို့ ခေါ်သည့် ဤခွေးကတော့ လျှာအရှည် ၄.၅ လက်မ ရှိတာမို့ ကမ္ဘာ့ ရှာအရှည်ဆုံးခွေးအဖြစ်
Labels: photos : knowledge
နောက်ခြေနှစ်ချောင်းမသန်မစွမ်းဖြစ်နေသည့် ဆိတ်တစ်ကောင်ဟာ ၎င်း၏ရှေ့ ခြေနှစ်ချေင်းပေါ်တွင်အား
ပြုကာလမ်းလျှောက်တတ်အောင် လေ့ ကျင့် နိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်...
ဆိတ်ပိုင်ရှင် ရွှယ်ယွန်းဘောင် ရဲ့ အဆိုအရ ထိုဆိတ်သုံးလသားအရွယ်တွင်နောက်ခြေနှစ်ချောင်းအား လှည်း
ဖြတ်ကြိတ်သွားခဲ့ သဖြင့် ကျိူးသွားခဲ့ ရသည်ဟုသိရပါတယ်...
" ဒီဆိတ်တော့ အသက်ဆက်မရှင်နိုင်တော့ ဘူးလို့ အားလုံးကထင်ခဲ့ ကြပါတယ်...အခုလိုအသက်ဆက်ရှင်
တဲ့ အပြင် ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ လုံးဝကိုမတွေးထင်ထားခဲ့ ပါဘူး " လို့ 
ရွှယ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အစပိုင်းမှာတော့ ဆိတ်ကလေးဟာ ရှေ့ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ်မှာထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့ ခဲခဲယဉ်းယဉ်းကြိုး
စားခဲ့ ရပါတယ်...မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျခဲ့ တာလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ...
တိရိစ္ဆာန်တောင်မှ လောကဓံကို အံတုနိုင်သေးတာ...လူသားတွေက ပိုလို့ တောင်စိတ်ဓါတ်ကြံ့ ခိုင်
လဲကျလိုက်ပြန်ထလိုက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေတာကိုက သနားစရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်...
အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကိုက မကြည့် ရက်စရာပါပဲ...
သို့ သော်လည်း ဆိတ်ကလေးဟာ ဇွဲမလျော့ ပဲ ဆက်လက်ကြိုးစားနေခဲ့ တာမို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ယောင် တစ်
ယောက် ဆိတ်ကလေးကိုကူညီဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
နောက်တစ်လလုံးလုံးသူဟာ ဆိတ်ကလေးကိုရှေ့ ခြေနှစ်ချောင်းနှင့် အားပြုကာ လမ်းလျှောက်တတ်အောင်
လေ့ ကျင့် ပေးခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ ဆိတ်ကလေးဟာ လျှောက်တတ်သွားပါတော့ တယ်...
အခုတော့ ရွာသားတွေရော တစ်ခြားအရပ်ဒေသမှလူတွေပါ ဆိတ်ကလေးကိုလာရောက်ကြည့် ရှုနေကြတာ
မို့ ထိုရွာမှာတော့ စူပါစတားဖြစ်နေပါပြီ...
ရွှယ် နှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့ ဟာ ယခုအခါမှာတော့ ဆိတ်ကလေးကို တစ်သက်လုံးစောင့် ရှောက်မွေးမြူသွားကြ
ဖို့ စီစဉ်ထားပါတော့ တယ်...
A goat left partially disabled has learned to walk again by balancing on his front legs. According to owner Xue Yunbao the goat's hind legs were crushed when it was was run over byacart at three months old. Xue says: "We all thought it couldn't make it.
We never expected it would survive and even learn to walk upside down". Yao said, at first, the little goat struggled to learn to walk on its two forelegs, falling to the ground time and time again.
"It was so sad. It stood up then hit the ground, then again stood up and hit hard again. Simply looking at it doing that would make you suffer!" However, the goat didn't quit and Yao decided to help it.
Over the next month he helped to train the goat to stand on its forelegs and it eventually learnt how to walk on them. The goat has now becomealocal celebrity as villagers and strangers come to look at it. Xue and his wife now plan take care of the goat for the rest of its life.
Posted by Unknown | at 10:40 AM |0comments
မျက်စေ့ ပသာဒဖြစ်စေဖို့ ...မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းကြည့် ကြစို့ ....
အဲဒါမှ အမှန်အကန်ပန်းသီး ( Apple ) တံဆိပ်....
နက်(net) ပေါ်မှာလည်းချက်(chat)...မီးဖိုပေါ်မှာလည်းချက်...သူကမှ တစ်ကယ့် ကိုချက်ကြီးအစစ်ဗျာ...
ကိုယ့် ဘက်ကကြည့် တော့ သူရဲကောင်း...သူ့ ဘက်ကကြည့် တော့ မျောက်စုတ်၊မျောက်နာ...
မင်္ဂပါဆရာမ...ရှာလိုက်ရတာဗျာ...ဒီလိုအခွင့် အရေးမျိူးပြန်ရပါ့ မလားလို့ ...
ဒါကတော့ တစ်ကယ့် ကျားကျောင်းဆရာတော်ပါ...(ထိုင်းနိုင်ငံမှရှိပါတယ်...)
ဒဲ့ ဘာသာပြန်လိုက်တော့ ...ဒီလိုအမြီးအမောက်မတည့် တာတွေဖြစ်လာတယ်...
ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ ထပ်တူမကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေ...
လေဒီများရဲ့ ဦးနှောက်က အကန့် အကန့် နဲ့ အလုပ်လုပ်တာတဲ့ ဗျာ...
ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ၊ ပြုစုစောင့် ရှောက်ပါလေ...
တစ်ချိန်ကျယင်သူတို့ ကသင့် အတွက် လူအိုရုံရှာပေးကြပါလိမ့် မယ်...
ကဒ်အဟောင်းတွေကို အကျိူးရှိအောင် ဒီလိုသုံးလို့ ရတယ်နော်...
စားကြဦးမလား ကျင်ငယ်ရေခေါက်ဆွဲတဲ့ ...
ဆီကုန်လည်းသက်သာ၊ ဒရိုင်ဘာလည်းအများကြီးမလိုတဲ့ တရုတ်တို့ အကြံ...